Waxyaabaha canabka ah | February 2020
Ugu Weyn Ee Waxyaabaha canabka ah
Sida loo ilaaliyo sifooyinka bogsiinta ee jelly boqornimada
In beekeeping, jelly boqornimada waxaa loo tixgeliyaa alaabta ugu quruxda badan oo qiimo leh. Thanks to this elixir this mucjisada, shinni kartaa quudin karaan carruurtooda, iyo sidoo kale boqoradeeda, kuwaas oo buuxiya rugta leh dadka cusub. Aynu ogaanno sida loo kaydiyo jelly boqortooyada. Ma taqaanaa? Royal jelly soo saaraan kalkaalis bees.
Xaaladahaas oo ay qaataan jelly boqornimada, tilmaamaha isticmaalka iyo qiyaasta
Dad badan ayaa marar badan maqlaya sida badeecada dabiiciga ah ee gaarka ah, sida jelly boqor. Sidoo kale badeecadan waxaa loo yaqaan magac kale - "Jelly Royal". Shinni jelly shinni - waa maxay? Maadkani waa qarsoodi ah oo qarsoodi ah qanjidhada ee shinnida shaqaalaha ee ku nool rugta. Waxaa soo saaray cayayaanka oo ah 5-15 maalmood jir.
Sida loo soo ururiyo shinbiraha shinni, isticmaalka sheyga shinni
Bee venom waxaa badanaa loo isticmaalaa daawo ah mid aad waxtar u leh. Run, waxaa lagama maarmaan ah in si haboon loo ururiyo oo loo isticmaalo shimbiraha shimbiraha, sababtoo ah, marka laga reebo daawaynta jirka, way ku sumoobi kartaa. Hoos waxaan ka hadleynaa faa'iidooyinka shimbiraha shinni iyo sida loo isticmaalo. Maxaad u egtahay miyir-beelka? Haddii shinni aad u yaryar, waxaad ku adkaan doontaa inaad aragto sunta, sababtoo ah waxay u bixisaa maqaarka hoostiisa qadar yar - kaliya 0.2-0.8 mg.
Noocyada waxyaabaha shinni ah, isticmaalka bini'aadamka
Mawduucaan waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha shinni ah, oo dadku si weyn ugu adeegsanayaan warshado kala duwan. Waxaan kuu sheegi doonnaa waxa merva ku jira beekeeping, maxay tahay muhiimada sheyga shinni iyo caanaha drone, iyo sidoo kale wuxuu kuu sheegi karaa waxyaabaha bakteeriyada leh ee wax ku leh. Ma taqaanaa? Bees waa nooc khaas ah oo khudrado ah.
Goorta iyo sida habboon si aad u qaadatid jelly boqortooyada
Qof kastaa wuu ogyahay faa'iidooyinka sheyga caadiga ah ee shinni, sida malab iyo propolis. Waxaa sidoo kale jira alaab noocaas ah oo ay soo saaraan bees sida jelly boqor. Tani waa dawo bogsasho leh oo loo isticmaalo daawada iyo qurxinta. Bees waxay u keentaa quudinta ilmo-galeenka iyo kalluunka sii kordhaya. Dirxiga shaqooyinka caadiga ah ee caanaha ah waxay helaan caanaha boqortooyada kaliya 3 maalmood ee ugu horreeya noloshooda, taas oo ah 60-80 maalmood.
Sidee malab miro leh, faa'iido bogsiinta malab cilantro
Coriander (lat - Coriandrum) waa warshad etromaslennoe herbaceous ah ee dallad qoys. Dad badan ayaa ogyahay nadiifiyaha sababtoo ah abuurkeeda, taas oo loo isticmaalo sida cunto dabiici ah, ama caleemaha iyo caleemaha, oo loo yaqaan "cilantro" (quinda) oo loo isticmaalo geed khudaar ah. Wax yar oo aan garanayn waa mashiinka dhirta sida geedka malab, oo siinaya malab dhadhan fiican leh oo malab leh oo caafimaad leh.
Maxay tahay malab wacdeyaal ah?
Way adagtahay in la qiyaaso wax soo saarka cuntada oo ka faa'iideysanaya oo dhadhan fiican leh malab. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah noocyada malab, mid kastoo uu leeyahay hanti gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, kaliya noocyada qaar ka mid ah qiimaha ugu muhiimsan ee kaydsiga iyo daawada dhaqameedku waxay leeyihiin qaab gaar ah bogsashada. Tani waa nooca malab ee leh phacelia.
Waa maxay fayoqaha shinni ee faa'iido leh, sifooyinka daawooyinka iyo ka hortagga alaabta?
Badeecooyin badan oo shinni ah ayaa loo adeegsadaa nin laga soo bilaabo wakhtigaas. Gaar ahaan, malab iyo caan waa ay yaqaanaan qof walba waxaana loo adeegsadaa. Si kastaba ha ahaatee, cid kasta ogyahay in ay jiraan ugu yaraan hal daraasad oo la mid ah, kuwaas oo sidoo kale ay ku heleen codsigooda shaqooyinka kala duwan. Sidaa daraadeed, maanta waxaan ka hadli doonaa waxa shinni noqda, sida ay faa'iido u tahay, iyo sida loo isticmaali karo nolol maalmeedka.
Qodobbada waxtar leh ee aboorka, isticmaalka iyo ka horjeeda
In kasta oo xaqiiqda ah in aan aboor ku beerta waa cadowga ugu muhiimsan ee beekeepers, mararka qaarkood burburinta finan oo dhan, daawada dad, cayayaankan waxaa lagu qiimeeyaa sida macnaheedu yahay in la dagaallanka qaaxada iyo dhalmo la'aanta. Hooska waxaan ku eegeynaa sida ugu dhow ee isdhexgalka ee daawaynta leh tincture baalal daacad ah. Tincture wax ku dhagan: sharaxaad Aboorka, ama aboor ku beeri, waa cayayaan ugu khatarsan ee finan shinni, maxaa yeelay waxaa ku jira in ay u bixiyaan ukumaha.
Malabka Linden: sharaxaad, halabuurka, faa'iido iyo waxyeelo
Marka laga eego cuntooyinka dhaqanka ah ee isticmaalaya malab, lime waxaa badanaa lagu sheegaa. Dad badan ayaa isku dayay, laakiin cid kastaa way ka war qabtaa midnimada alaabta shinni. Sababtoo ah caraf udgoon, cad quruxsan oo leh jaale huruud ah iyo dhadhan aan dhicin, malabka lime waxaa loo tixgeliyaa qiimaha ugu badan ee dhammaan noocyada malab dabiiciga ah.
Isticmaalka balaasto ee daawada dhaqameedka iyo qurxinta shimbiraha: faa'idooyinka iyo dhibaatada
Beekeeping waxay dadka siisay ma aha oo keliya malab, laakiin sidoo kale walaxdaas oo kale ah sida maadada. Cilmi-baadhayaashu waxay kaftameen inuu noqday kii ugu horreeyay ee abuura ee abuuray nolosha. Xitaa wakhtiyadii hore, waxay ku daboolan yihiin nabarrada, iyo geesiyaalkii hore ee runtii Giriigga ah waxay ahaayeen kuwo aad u yaqaan sheygan cajiibka ah ee shinnida. Sidaa daraadeed, Odysseus waxay u isticmaashey halkii laga xayuubin lahaa kooxdeeda si ay uga badbaadiso inay ku heeseyso sirta, iyo Daedalus wuxuu abuuray baalal Icarus.
Hababka ugu wanaagsan ee lagu tijaabiyo malab dabiiciga ah
Honey waa badeecad aad u qiimo badan oo aan loo isticmaalin oo kaliya nafaqada, laakiin sidoo kale daawada iyo qurxinta. Si uu saameyn ugu yeesho jidhka inuu noqdo mid wanaagsan, mid waa inuu fiiro gaar ah u yeesho waqtiga iibka alaabtiisa. Sidee loo hubiyaa tayada malabku? Jawaabta su'aashan waa sahlan. Natiijooyinka ugu saxsan waxay siin doonaan falanqaynta sheybaarka.
Mid ka mid ah alaabta wax soo saarka iyo aad u faa'iido leh ee kaydsiga, kuwaas oo beeska si taxaddar leh loo diyaariyey manka si waa manka shinni. Faa'iidooyinka badeecadaani ee daawada dhaqameed ayaa loo yaqaan qarniyo badan. Ka feker waxa ah shinni perga, waa maxay faa'iidooyinka ay leedahay iyo sida loo saxo.
Waxyaalaha qorraxda ah ayaa sameeya: adigoo talaabo talaabo talaabo ah
Qaswad kasta oo isxilqa'yi ah wuxuu ogyahay: wax badan ma dhicin. Sidaa darteed, haddii xilli wanaagsan ka dib waxaad leedahay dhowr kiilo oo ah malab cusub oo cusub - xitaa ha ka fekerin inaad ku keydiso sanduuqa dambe. Maqaalkani, waxaad ku baran doontaa sida aad uga faa'iideysan karto qolalka shinni ee aan faa'iido la'aanta lahayn iyo samaynta rinjiga qoraxda ee muhiimka ah.
Warshadeynta wax soo saarka: sida loo dalbado shinnida
Beerlayaal badan ayaa la yaabay sida loo dhalo wax dhirta leh ugu yaraan waqtiga iyo lacagta. Isla mar ahaantaana, ka gaabinta raadinta macluumaadka ku saabsan hababka kala duwan, ha helin natiijada laga filayo. Taasi waa sababta ay ugu habboon tahay in arrintan loo fiiriyo si faahfaahsan. Qaababka isticmaalka qalabka ee kaydsiga kaydka Waxyaabaha rinjiga - mid ka mid ah qalabka fududeeya shaqada ee apiary.
Sida loo kariyo vodka guriga: raashinka
Badankeena waxaan u qaadanaa in cabbitaanka malabku yahay vodka oo kaliya, taas oo malab lagu daro. Laakiin fikirkan badiyaa waa qalad. Xaqiiqdii, diyaarinta caadiga ah ee cabitaanka waxay ka kooban tahay karkarinta iyo malabinta malab, iyo foomka saafiga ah ee dhamaystiran ee cabbitaanka khamriga ee cabitaanku kama badna 16%.
Malabka Chestnut: waa maxay faa'iido, ka kooban kiimikada iyo contraindications
Malabka Chestnut waa noocyo naadir ah, aan caadi ahayn oo aan marar badan suuqa laga iibsan. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu u qalmaa in lagu siiyo credit si uu u hantidiisa gaarka ah. Noqoshada badeecada dhabta ah ee bogsata, waxay leedahay saameyn togan oo ku saabsan jirka bini-aadmiga, iyo ka kooban waxay leedahay sifooyin gaar ah.
Waa maxay zabrus ee kaydsiga iyo sida loo daaweeyo
Tan iyo wakhtiyadii hore, dadku waxay isticmaalaan waxyaabaha shinni ah ee baahidooda. Honey iyo waxyaabo kale oo dheellitiran ayaa laga isticmaalaa cuntada, loo isticmaalo daaweynta iyo ka hortagga hargabka. Mid ka mid ah alaabooyinka ugu wax ku oolka badan iyo kuwa gaarka ah ee ay na siiyaan nooca dabiiciga ah iyo shinni waa zabrus. Qodobkani waxaan ka hadli doonnaa hadiyaddan gaarka ah ee dabiiciga ah iyo sida loo isticmaalo zabrus si sax ah.
Waa maxay malab cad
Dhamaan dadka jecel malabu waxay og yihiin in ay jirto caddeyn cad oo alaabtan qiimaha leh, oo leh kala duwanaansho gaar ah, taas oo aan ka wada hadli doonno maqaalkan, ogaan sida qiimaha malabku yahay iyo waxa laga sameeyey, iyo sidoo kale in ay ka caawiso soocista alaab dhab ah. Dhadhamin iyo muuqaal Haddii aan ka hadalno badeecad shimbir ah oo saafi ah iyada oo aan dhicin iyo wax lagu daro, ka dibna waxay yeelan doontaa midab yar oo midab leh, maxaa yeelay waa mid aan suurtagal ahayn in lagu qasbo beeska si ay u ururiso nadiifka gaar ahaan kuwa dhirta kuwaas oo si fiican ugu habboon.
Maxay tahay malab la yiraahdo alaab haween ah?
Malabka Acoustic waxaa iska leh dhowr nooc oo macaan oo dabiici ah, oo ku saabsan dadka aad u yaryar. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in sheyga uu yahay mid gaar ah oo noociisa leh oo leh waxyaabo badan oo wax ku ool ah. In this article waxaan kuu sheegi doonaa si faahfaahsan oo ku saabsan malab malab: waxa ay tahay iyo sida ay faa'iido leh. Dhadhamin iyo muuqaal Tani soo saarid shinni ah waa mid dhif ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Waxyaabaha canabka ah 2020